နယူး Self-ယာဉ်မောင်း Google ကမော်တော်ကား - သတင်း Rule
နယူး Self-ယာဉ်မောင်း Google ကမော်တော်ကား
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “နယူး Self-ကားမောင်း Google ကကားသေးငယ်နှင့်လူ့အကူအညီများအပေါ်တောင်မှလျော့နည်းမှီခို” New York မှာဆမ် Thielman ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 15 မေလအပေါ်များအတွက် 2015 16.03 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သငျသညျ Mountain View အတွက် Google ရဲ့ဌာနချုပ်အနီးဆိုရင်, ကယ်လီဖိုးနီးယား, ဒီနွေရာသီ, သငျသညျစက်ရုပ်ကားကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောကြင်နာရှေ့ထိုင်ခုံ၌လူတစ်ဦး၏အကူအညီမပါဘဲပတ်ပတ်လည်ကားမောင်းမြင်စေခြင်းငှါ. အဆိုပါနည်းပညာကုမ္ပဏီ သောကြာနေ့ကကြေညာခဲ့သည် ဒါကြောင့်မကြာမီသေးငယ်တဲ့လှတျမညျ, ၎င်း၏ဌာနချုပ်အနီးရှိလမ်းများမှအပေါ်ကားမောင်းသူ-ကူညီယာဉ်များကိုပိုမိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းဗားရှင်း.
လေးပြည်နယ်များယခုရှိပါတယ် (သူတို့ထဲကနှစ်ခုထိစပ်) သောလမ်းအပေါ်ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းခွင့်ပြု: မီချီဂန်, ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်, ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်နီဗားဒါး. နှင့်အခြားပြည်နယ်များဝတ်စုံကိုအောက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ Google ကိုစျေးကွက်ကမှ၎င်း၏ Self-ကားမောင်းကားအဖြစ်အစွန်းရောက်အဖြစ်ထုတ်ကုန်ဆောင်တတ်၏အတိအကျကိုဘယ်လိုမြင်မှရတဲ့နေ.
Google နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနနို့တိုက်သတ္တဝါ-operated မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့က okayed ရှေ့တော်၌ထိုအသစ်သောမော်တော်ယာဉ်အချို့သိသိသာသာစိတ်ဖိစီးမှုအောက်၌ဖုံးထားခဲ့ပါတယ်. "ကျနော်တို့ကားကိုပူလုပ်ပြီးပြီ, ကျနော်တို့ကားအအေးလုပ်ပြီးပြီ, ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြုပြီးပြီ, ကြှနျုပျတို့သညျ "တစ်ကြာရှည်ခံမှု '' ဖုလမ်းကြောင်း '' ကတဆင့်ကားကိုမောင်း, Google ကစနစ်တွေအင်ဂျင်နီယာ Jaime Waydo ကုမ္ပဏီကယနေ့ထုတ်ထားသစ်ကိုမော်တော်ယာဉ်၏ဗွီဒီယိုတစ်ခုကဆိုပါတယ်.
Google ရဲ့နောက်ဆုံးကားရိုင်းသို့ဖြန့်ချိခဲ့ကတည်းကမြင်နိုင်တိုးတက်မှုရှိခဲ့င်. နောက်ဆုံးပေါ်မော်တော်ယာဉ်ကူညီကြလိမ့်မည်, လိုအပ်ချက်ရှိလျှင်, တစ်လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့စတီယာရင်ဘီးနှင့်အတူလူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းအားဖြင့်, ဓာတ်ငွေ့နင်းနှင့်ဘရိတ်နင်းကျော်သိမ်းယူခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိစ္စတွင်. အဟောင်းတွေဗားရှင်းအရေးပေါ်အော်ပရေတာတစ်ဦးနှစ်ဦး-လူတစ်ဦးအဖွဲ့သည်လိုအပ်သော.
Self-ကားမောင်းမော်တော်ယာဉ်များကိုအမေရိကန်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ပုံမှန်အင်္ဂါရပ်ဖြစ်လာမီကတစ်တန်းရ duck တွေအများကြီးရှိပါတယ်. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တိုနီ Ilia ၏နီဗားဒါးရဲ့ဦးစီးဌာန The Guardian ကသို့ပြောသည် ပြည်နယ် "လို့လမ်းသွား-ခံရသောဒဏ်ချက်အားနှင့်ခလုတ်ဖွင့်တောက်ပစေတယ်" ဟုတောင်းခဲ့, ဖြစ်နိုင်နေရာတိုင်းအားလုံးယာဉ်မောင်းများအတွက်ကောင်းသောကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို. သို့သော်ထိုသို့အလားအလာကုန်ကျစရိတ်ချွေတာနှင့်အတူအရေးပါသောပြဿနာတက်ထောက်ပြတတ် (နှင့်အသက်ကယ်) ဆန်းသစ်တီထွင်မှု: သူတို့ပုံမှန်အစည်းအဝေးလိုအပ်, လုပ်ငန်းဆောင်တာ, မှန်မှန်ထိန်းသိမ်းထားအဝေးပြေးလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ.
Related: Google ကယင်း၏ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းခဲ့ဝန်ခံ 11 အသေးစားယာဉ်မတော်တဆမှု
အမေရိကန်ကအများကြီး ပင်၎င်း၏တံတားများပြုပြင်ရန်မတတ်နိုင်, အများကြီးလျော့နည်း၎င်း၏အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်တွေက dotted လိုင်းများနှင့် reflector repaint. အခြေခံလိုအပ်ချက်များအပေါ်ဖြုန်းဖို့ built-in မဆိုင်းမတွဖြစ်နိုင်ကယ်လီဖိုးနီးယားထဲက Google ကစောင့်ရှောက်မည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုအဘို့အခက်ခဲစေရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ Daimler လိမ့်မည် – အရာတစ်စီးရီးရှိပါတယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်အောက်မှာ – ပြည်နယ်လိုင်းများကိုဖြတ်ကူးရန်. Google ကမှထုတ်ပြန်သောဤကိစ္စကိုအပေါ်အစိုးရ petitioning ဖြစ်ပါတယ်, ယူဆရ reinvest မှ. အဆိုပါကုမ္ပဏီအများအပြားကိုအစိုးရအေဂျင်စီများမှာအများအပြားဥပဒေကြမ်းများအပေါ် lobbyists အလုပ်, အထူးသ H.R. 5021, လက်မှတ်ရေးထိုးနောက်ဆုံးသြဂုတ်လ, တစ်ဦးလုပ်ရပ်ကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ .8 ထိုအဝေးပြေး Trust Fund သို့ BN, သော Interstate ထိန်းသိမ်းထား.
Google ကသူ့ရဲ့အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်သောကြာနေ့နံနက်ထုတ်ပေးတဲ့လွှတ်ပေးရန်အတွက် "ယာဉ်မောင်း၏တစ်ခုလုံးကိုထမ်းရသောဝန်ပခုံးနိုင်ကြောင်းတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်" ဟုဆိုသည်. "ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုရန်, ကျွန်တော်တို့ဆီးနှင်းဖုံးလမျးတို့ကိုပွငျဆငျကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်, ယာယီဆောက်လုပ်ရေးအချက်ပြမှုများအနက်ကိုဘော်ပြနှင့်များစွာသော drivers တွေကိုကြုံတွေ့ရသောအခြားစားမှုအခြေအနေများကိုင်တွယ်ရမည်။ "
self-ကားမောင်းကားများ, ဤအချက်မှာ, လုပ်ကိုင်ဖို့အထူးလိုင်စင်လိုအပ်သာယာဉ်များ၏စမ်းသပ်ဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်, အစားယေဘုယျလူဦးရေ၏ထက်. Google နှင့်ကုမ္ပဏီ Daimler နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်မျှော်လင့်နေကြပါတယ်, မြို့ကြီးများရှိကြောပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချရန်လုံလောက်သောကျယ်ပြန့်ကလေးမွေးစားအားပေးနှင့်ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင်နဲ့တူစက်ရုံများဖယ်ရှားပစ်ရန်အားထုတ်မှုအတွက် Google က. ကုမ္ပဏီ Daimler ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကပိုရိုးများမှာ: overtaxed drivers တွေကိုတာရှည်-ခရီးရှည်သွားထရပ်ကားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလျော့နည်းမှီခိုအောင်.
နှစ်ဦးစလုံးကုမ္ပဏီတွေထက် သာ. မွေးရာပါလူ့အမှားထောက်ပြကြပြီ 90% အသွားအလာယာဉ်မတော်တဆမှုများ; ခရစ် Urmson, Google ရဲ့စီမံကိနျး၏ညွှန်ကြားရေးမှူး, ကပြောပါတယ် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က က၎င်း၏ကားများလူသားတွေထက် "ကပိုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ပိုပြီးခုခံကာကွယ်ယာဉ်မောင်း" ဖြစ်ရန်အဘို့အနောက်ဆုံးမှာရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်. "နောက်တဖန်တစ်အသွားအလာမတော်တဆထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ဦးဆုံးရှုံးသွားဘယ်တော့မှမြင်ယောင်ကြည့်ပါ,"ဟုသူကဆိုသည်.
နီဗားဒါးနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အပါအဝင်အနည်းငယ်ပြည်နယ်များကဥပဒေရေးရာအများပြည်သူလမျးတို့ကိုပွငျဆငျအပေါ်သူတို့ကိုလုပ်ကိုင်ရန်လုပ်ကတည်းက Google ရဲ့ကားတွေထက်ပိုမိုတဲ့သန်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနာရီ logged ပြီ. သူတို့ဟာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြ 11 ကစမ်းသပ်ခြင်း၏သင်တန်းကျော်ယာဉ်မတော်တဆမှု. အားလုံး 11 လူသားတွေ၏အမှားခဲ့ကြ.
25135	0 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, အပိုဒ်, ကယ်လီဖိုးနီးယား, Google က, လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဆမ် Thielman, self-ကားမောင်းကားများ, နည်းပညာ, အမေရိကန်သတင်း
← LG ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မြို့ပြကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရောင်းချ →